mercredi, 23 novembre 2016 14:13
Hopitaly manarapenitra Andohatapenaka : Nahazo fanomezana avy any Quebec
Nanolotra fitaovana ho an'ny Hopitaly manara-penitra Andohatapenaka toy ny bloc opératiore, farafara sy kojakoja maro samy hafa ilaina amin'ny fitsaboana ny minisitra solontenan'ny Quebec omaly atoandro. Tonga nanotrona sy nandray izany fanomezana izany ny minisitry ny fahasalamana malagasy. Ity hopitaly ity moa dia nasiana fepetra manokana atao fiandry ho an'ireo mpizaika miisa 3000 miatrika ny frankofonia.
mercredi, 23 novembre 2016 11:07
Rotaka tao Mampikony : 17 ireo voasambotra, zaza tsy ampy taona ny iray
Nisokatra ny fanadihadiana mikasika ny rotaka ka nandoran’ny olona ny fiara sy tranon’ny Zandary ary kamiao iray an’olon-tsotra tao Mampikony ny 4 novambra 2016, dia olona 17 no voasambotra ka iray amin’izy ireo dia zaza tsy ampy taona. Mitentina 2 tapitrisa Ariary mahery ny entan’ireo Zandary miasa ao Mampikony kilan’ny afo sy voaroba araka ny tatitra nataon’ny lehiben’ny sampandraharaha misahana ny heloka bevava eo anivon’ny Zandarimariam-pirenena, Rajaohasina Adrien Delson. Zandary miisa 8 tao no tena lasibatra sy voaroba fananana io araka ny tatitra. Natolotra ny Fitsarana eto Mahajanga androany Alarobia izy ireo. Mitohy hatrany ny fikarohana ny naman’izy ireo izay nitsoaka.
Page 167 sur 281